Ebee na mgbe kwesiri ka ndị ahịa ọhụrụ malite itinye nchịkwa aka na ahịa anyị FXCC Blog
Ebee na mgbe mgbe ndị ahịa ọhụrụ ga-amalite ịgbakwunye nchịkwa aka na ahia anyị
Apr 22 • N'etiti ahịrị • 6911 Echiche • 1 Comment na Ebee na mgbe kwesiri ka ndị ahịa ọhụrụ malite itinye nchịkwa aka na ahia anyị
Mgbe anyị chọpụtara ụlọ ahịa ahịa ahia anyị ihe omuma nke ọma bụ iji nyocha na ahịa niile nhọrọ dị iche iche dị na teknụzụ anyị. Ọ bụ ezie na nchịkọta dị mkpa chọrọ nkà dị iche iche dị iche iche iji mụta otú e si eji ya mee ihe n'ụzọ dị mma, n'ozuzu mgbe oge (ebe ọ na-azụ ahịa na ebe niile) niile na-amalite inwe ọgụgụ isi, nchọpụta nchịkwa bụ akụkụ nke anyị ahịa na anyị nwere ike (na tiori) itinye aka na obere ihe ma ọ bụ enweghị ahụhụ ọ bụla. Ya mere, ịzụ ahịa site na nyocha nke nyocha nwere ike ịbụ onye na-amaghị nke ọma nke bụ ihe kpatara anyị ji chee na anyị ga-ekpuchi isiokwu ahụ n'obere nkowa na ntinye akwụkwọ a.
Ọdịdị dị mma nke nyocha nke nyocha na-emekarị ka ndị ahịa na-ebute isi ha na nyocha nyocha dị ka ọchịchọ bụ maka ndị ahịa na-agba ọsọ tupu ha agaa ije ije. Ya mere, enwere njem a na-atụ aro maka iji nyocha nyocha, karịsịa maka ndị ahịa ọhụrụ, na-eji nwayọọ nwayọọ ewebata ndị ahịa ọhụrụ na nyocha nyocha na ụzọ dị jụụ ma tụọ anya? Na ntinye akwukwo a ka anyi ga elele anya 'ihe ndi ozo' ndi oru ohuru kwesiri iji weputa nyocha nke ndi oru uzo n'adighi ahia ha.
Na anyị "bụ ihe na-emekarị ka enyi gị?" Ngalaba nlezianya nyocha nke izu ụka anyị na-akpachara anya mee ka nyocha anyị dị mfe ma nwee ọtụtụ ihe kpatara ya. Mbụ, anyị ga-eme ka nyocha anyị nwee ike ịgụta na Bekee maka ọtụtụ ndị ahịa anyị ndị na-adịghị asụ Bekee dị ka asụsụ mbụ ha. Nke abuo, anyi kwesiri ijide n'aka na nchoputa bu ihe ndi mmadu nwere ike inweta n'ozuzu ha, ebe ha na achota na otutu ndi oru ohuru ga enwe ike iwere ihe bara uru site nyocha. N'ikpeazụ, ebumnuche anyị bụ iji nwayọọ nwayọọ wepụta ndị ahịa ọhụrụ na-egosi ahịa nke na-egosi na ọtụtụ ndị nkatọ na-ele ya anya dịka ọ dị mfe iji dị irè. N'ihe ụfọdụ, nchịkọta nke nyocha na-emekarị ka ọ ghara iduga, Otú ọ dị, njirimara nke dabeere na akara bụ ngwá ọrụ a pụrụ ịdabere na ya maka nsụgharị sụgharịrị / ịzụ ahịa azụmaahịa (dịka nsụgharị kwa ụbọchị) dịka iji ọtụtụ ụzọ ahịa mgbagwoju anya, ma ọ bụ jiri chaatị vanilla enweghị ihe ọ bụla ọzọ karịa ọnụahịa na ya na-anọchi anya, dịka ọmụmaatụ, Candles Heikin Ashi naanị.
Anyị na-aga ịkọwapụta ụfọdụ n'ime ihe ndị a na-ejikarị eme ihe, ihe niile eji mee nyocha kwa izu na ihe niile dị na ntọala ha, iji gosi otú o si dị mfe iji wuo usoro aghụghọ ịzụ ahịa na-adịkarị mfe. ndị ahịa novice nwere ike iji ihe dị irè. Anyị na-aga iji ụda mgbapụ, PSAR, MACD, sistem dị egwu na RSI. Anyị ga-eji anọ n'ime ihe ndị a na-ejikarị eme ihe site na ụdị ọbịbịa anyị. Anyị ga-atụ aro ụfọdụ mmekọrịta na ndị ahịa anyị ka anyị ga-agba ume na-agba ndị na-agụ akwụkwọ anyị ume iwepụta chaatị dị mkpa iji ghọta nke ọma echiche anyị.
Ihe odide anyị ga - achọ ka ndị na - agụ akwụkwọ dọtịnụ ma tinye uche bụ AUD / USD na chaatị nke ụbọchị, nchebe nke hụwororịrị ụdị nke dị mma nke na - adịbeghị anya, nke nwere ike, ma ọ bụ na ọ bụghị, abanyela na mberede mechie izu ole na ole gara aga. Anyị ga-achọ ka ndị na-agụ akwụkwọ anyị rụọ ọrụ PSAR, MACD, RSI na ihe ndị dị mgbagwoju anya na nchịkọta ha. Anyị ga-amasị ndị na-agụ akwụkwọ anyị ka ha tinye 21, 50, 100 na 200 SMA na chaatị ha.
Kama iji ụdị ọ bụla na-agagharị agagharị, anyị ga-enyocha ebe ebigbu ihe dị mfe, ma ọ bụ SMA, dị na ọnụahịa na chaatị. Dịka anyị nwere ike ịhụ ụgwọ dị elu karịa ihe niile a na-akpọkarị SMA, ma na-eyi egwu imebi ụbọchị 21 SMA na ala.
PSAR bụ ugbu a karịa ọnụahịa na ihe ọjọọ.
Ma ugbu a, MACD adịghị mma ma na-eme ka ntụgharị dị ala jiri histogram anya dị ka onye ndu.
Na nhazi ọnọdụ nke 14,3,3, eriri ndị dị mgbagwoju anya agafeela ma wepụga ebe a na-atụgharịghị aka ma bụrụ ebe dị n'etiti ụzọ a na-atụghị anya ya na ọnọdụ dị egwu.
RSI dị na 59. Ọ na - eche ihu ala, ma na - echere ịgafe nkwụsị 50 dị oke egwu nke ọtụtụ ndị ahịa kwenyere na ha kewapụrụ ndị na - azụ ahịa site na ndị na - ere ahịa mgbe ha nyochaa nchebe ọ bụla.
A na-enye ndị MACD na PSAR akara ngosi ahụ, dịka ụda ndị ahụ siri ike, hapụrụ na ọnọdụ ndabara ha, na-egosiputa ọchịchọ ndị na-eme ka ha si na mpaghara ahụ. MACD bụ ihe na-ezighị ezi ma na-eme ka ọkpụkpụ dị ala jiri histogram ahụ anya. Otú ọ dị, ọnụahịa ka dị n'elu isi SMA niile, RSI ka ga-agafe akara iri ise.
Mgbe nnukwu oge na-agagharị, nke malitere na ma ọ bụ gburugburu 5th March, ọ dịtụghị ize ndụ na AUD / USD ga-enweta nkwụghachi azụ na ntakịrị iweghachị na ọgụgụ dị elu. Na-ewere nke a na nke ndị a kpọtụrụ aha tupu a gụọ ọtụtụ ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ichere maka nhazi zuru okè na ọnụ ọgụgụ ụyọkọ nke ndị na-egosi na a ga-edozi ha n'ụzọ zuru ezu tupu ha ebute ala. Dịka ọmụmaatụ, ndị ahịa nwere ike ịchọrọ ịnọdụ ala nke a dị ka ọkpụkpụ na-agbada ruo mgbe nrịgo 50 RSI gbajiri ma na-echere ruo mgbe ọtụtụ n'ime ọganihu ndị na-agagharị agafe gafere; 21, 50 na 100 dị ka ihe kachasị mkpa.
N'ebe ahụ, anyị na-aga, nke ahụ bụ ụzọ anyị dị mfe isi banye n'ụdị iji ụyọkọ nke ndị na-egosi iji mee mkpebi ziri ezi banyere ịbanye ahịa na ịzụ ahịa. Anyị eji ụma hapụ isi nyocha ọ bụla ma ghara ikpuchi njikwa ego na ebe anyị ga-edebe nkwụsị nke nyere na anyị ejirila nsogbu abụọ a na nso nso a n'etiti anyị.
Ma ihe anyị nwere n'ebe a bụ usoro dị elu dị elu nke nwere ike ịmepụta ebe ndị ahịa na-enweghị uche nwere 'ịmalite ịzụ ahịa. I nwere ike iche na ọ dị oke mfe kama ọ bụ okwu a ma ọ bụ abụọ ịdọ aka ná ntị na agbamume; enwere ọhụụ magburu onwe ya ma ọ bụ onye ahịa FX nke na-eji ihe ọ bụla ma ọhụụ abụọ na-akpali akpali iji mee ka ọtụtụ n'ime mkpebi ha na ọtụtụ ụlọ ọrụ mmemme nke ndị ahịa na-ezo aka na RSI na MACD n'akwụkwọ ndị ha zigaara ndị ahịa ha ...
" Akwụkwọ Ntuba Ahịa nke Ụlọ Nzukọ (LEI) maka USA bilitere na March site na 0.8% ịga njem dịka ihe mgbochi 100 larịị Aussie na-ebili ka RBA na-egosi na ọ nwere onu oriri na-achịkwa, ọ ga-ejidekwa ọnụego ọmụrụ nwa na ọkwa dị ugbu a »